စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ, စက်မှုဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် Automation, Micro Electro စက်မှုစနစ်အင်ဂျင်နီယာ, Machinery နည်းပညာ, ကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်ရေး, မှိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း, လျှပ်စစ်စက်နှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ, အခြေခံအဆောက်အဦးအင်ဂျင်နီယာ, ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ, စက်မှုလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ, စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ, Process ကိုပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ, စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ, အားကစားပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာ, အရည် Machinery, Biomechanical အင်ဂျင်နီယာ, embed စနစ်
မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးရေးနဲ့ Maintenance နည်းပညာ, မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ညီလာခံနည်းပညာ, မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်နီယာ
ပစ္စည်းများသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, ပစ္စည်းရူပဗေဒ, ပစ္စည်းဓာတုဗေဒ, သတ္ထုဗေဒအင်ဂျင်နီယာ, သတ္တုပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာ, ဇီဝမူလမဟုတ်သောသတ္တုပစ္စည်းများအင်ဂျင်နီယာ, Polymer အမျိုးအစားပစ္စည်းများနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, Composite ပစ္စည်းများနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, ဂဟေဆော်ခြင်းနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, Nano ပစ္စည်းများနှင့်နည်းပညာ, Functional ပစ္စည်းများ, စွမ်းအင်အသစ်ပစ္စည်းများ နှင့်ဖုန်းများအတွက်, Gemmology နှင့်ပစ္စည်းများနည်းပညာ, Powder ပစ္စည်းများသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, ဇီဝပစ္စည်းများ, သတ္တုပစ္စည်းများ, Hollow Fiber အမြှေးပါး, Nondestructive စမ်းသပ်ခြင်းနည်းပညာ, Renewable အရင်းအမြစ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, Biomimetic ပစ္စည်းများ, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ, အဆောက်အအုံ Decoration ပစ္စည်းများ, အမြှေးပါးနည်းပညာ
စွမ်းအင်နှင့်ပါဝါအင်ဂျင်နီယာ, နယူးစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, စွမ်းအင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စနစ်များအင်ဂျင်နီယာ, Thermal အင်ဂျင်နီယာ, လေစွမ်းအင်နှင့်ပါဝါအင်ဂျင်နီယာ, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်, စွမ်းအင်သိုလှောင်, သန့်ရှင်းစွမ်းအင်, ရေခဲသေတ္တာနှင့်အေးသိုလှောင်မှုနည်းပညာ
အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်နှင့်အလင်းပေးခြင်း, Smart Grid ပြန်ကြားရေးအင်ဂျင်နီယာ, လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနနှင့် Automation, Electromagnetic ဖျော်ဖြေမှုများနှင့်မိုက်ခရိုဝေ့နည်းပညာ, အမြင့်ဗို့အားလျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုအင်ဂျင်နီယာ, လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာစီမံခန့်ခွဲမှု
ရေအောက် Acoustic အင်ဂျင်နီယာ, Acoustic အင်ဂျင်နီယာ, အီလက်ထရောနစ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အင်ဂျင်နီယာ, အီလက်ထရောနစ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ, Microelectronics သိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, optoelectronics ပြန်ကြားရေးသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာပြန်ကြားရေးအင်ဂျင်နီယာ, အီလက်ထရောနစ်ထုပ်ပိုးနည်းပညာ, Electromagnetic Wave ကိုဝါဒဖြန့်ခြင်းနှင့်အင်တင်နာ, Electromagnetic ဖျော်ဖြေမှုနှင့်ကြိုးမဲ့နည်းပညာ, signal နှင့်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ယူခြင်း, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ, ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာ, Integrated Circuit ဒီဇိုင်းနှင့်ပေါင်းစည်းရေးစနစ်, နည်းပညာ, ဂြိုဟ်တုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆီကိုပြောင်းဖုန်စုပ်အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ, Optical Fiber ဆက်သွယ်ရေး, စာတိုက်ဆက်သွယ်ရေး, programming, မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ, ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာ, အသံအင်ဂျင်နီယာ, အရည် Crystal Display နှင့် optoelectronics နည်းပညာ
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာ, ကွန်ယက်အင်ဂျင်နီယာပြန်ကြားရေးလုံခြုံရေး, လျှပ်စစ်နှင့်ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာ, အရာအင်ဂျင်နီယာဌာန၏အင်တာနက်, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနည်းပညာ, ထောက်လှမ်းရေးသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, Spatial ပြန်ကြားရေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ, အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာအစုံလိုက်သုံး packet Core, လူမှုရေးကွန်ပျူတာ, ကွန်ပျူတာပေါင်းစည်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ် , Artificial Intelligence, Sensing နည်းပညာ
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ, အဆောက်အအုံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်စွမ်းအင်လျှောက်လွှာအင်ဂျင်နီယာ, ရေနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း, အဆောက်အဦလျှပ်စစ်နှင့်ထောက်လှမ်းရေး, လမ်း, တံတားနှင့်မြစ်-ဖြတ်ကျော်အင်ဂျင်နီယာ, အင်ဂျင်နီယာ, မြို့ပြဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ, အဝေးပြေး Fighting စီးတီးမြေအောက်အာကာသအင်ဂျင်နီယာ, စည်ပင်သာယာအင်ဂျင်နီယာ, မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး, မီးသတ် စက်မှုလယ်ယာဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာ
ဆိပ်ကမ်းရေကြောင်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့, ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်မြစ် Dynamics ကို, Hydro ဖွဲ့စည်းပုံအင်ဂျင်နီယာ, မြို့ပြရေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်, စိုက်ပျိုးရေးရေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နည်းပညာ, ဆည်မြောင်းများနှင့် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာ, ရေစီမံကိန်း, ရေအရင်းအမြစ်နှင့်ရေအားလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ, ဇလဗေဒနှင့်ရေအရင်းအမြစ်အင်ဂျင်နီယာ, မြစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု, ပစ္စည်းကိရိယာ နှင့်ရေအားလျှပ်စစ်ဘူတာ၏စီမံခန့်ခွဲမှု
စစ်တမ်းကောက်ယူနှင့်ပုံထုတ်အင်ဂျင်နီယာ, Remote Sensing သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, Navigation အင်ဂျင်နီယာ, Geodesy နှင့်စစ်တမ်းအင်ဂျင်နီယာ, Photogrammetry
ဓာတုအင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာ, စွမ်းအင်ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ, အရင်းအမြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, ဓာတုဗေဒအင်ဂျင်နီယာနှင့်စက်မှုဇုန်ဇီဝနည်းပညာ, Polymer အမျိုးအစားထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ, ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် Machinery, အော်ဂဲနစ်ဓာတုထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ, Fine ဓာတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ, ရေနံဓါတုစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ, ရေနံသန့်စင်ပြီးနည်းပညာ, ဓာတု Fiber ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ
ဘူမိအင်ဂျင်နီယာ, Exploration နည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, အရင်းအမြစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နီယာ, ဘူမိအင်ဂျင်နီယာ, မြေအောက်ရေသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာ
သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာ, ရေနံအင်ဂျင်နီယာ, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအင်ဂျင်နီယာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုင်း, သတ္တုလုပ်ငန်းစဉ်အင်ဂျင်နီယာ, သတ္တုအရင်းအမြစ်များအင်ဂျင်နီယာ, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကွင်းဆင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအင်ဂျင်နီယာ, Mineralogy, Drilling အင်ဂျင်နီယာဌာန
အထည်အလိပ်အင်ဂျင်နီယာ, ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, Nonwoven ပစ္စည်းများနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, အထည်အလိပ်စစ်ဆေးရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး, အထည်အလိပ်ဓာတုဗေဒနှင့်အင်ဂျင်နီယာသဆေုံးခွငျးနဲ့ပြီးဆုံး
အလင်းဓာတုအင်ဂျင်နီယာ, သားရေထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာ, Polymer အမျိုးအစားပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ, အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ဝေရေးနည်းပညာ, အလင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, နည်းပညာ, ထုတ်ဝေရေးဖော်ဆောင်ရေးနှင့်ထုတ်ပေးခြင်းအင်ဂျင်နီယာ, ပုံနှိပ်အင်ဂျင်နီယာ, ဆေးဆိုးခြင်းနှင့်ပြီးဆုံးနည်းပညာ, အရသာနှင့်အမွှေးအကြိုင်နည်းပညာ, ပျော့ဖတ်နှင့်စက္ကူထုတ်ပိုး
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ယာဉ်အသွားအလာအင်ဂျင်နီယာ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအင်ဂျင်နီယာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း,
မီးရထားယာဉ်, မီးရထားအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ, မီးရထားအသွားအလာစစ်ဆင်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု, မီးရထားဆက်သွယ်ရေးအချက်ပြ, မီးရထားစက်ခေါင်းယာဉ်, High Speed ​​မီးရထားနည်းပညာ, Electrify မီးရထားနည်းပညာ
ပိုက်လိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု, ပိုက်လိုင်းအင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေး, ပိုက်လိုင်းအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ
ဆိပ်ကမ်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု, ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ, ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, ဆိပ်ကမ်းနှင့်သင်္ဘောတင်စီမံခန့်ခွဲမှု, စိတ်တိုင်းကျရှင်းလင်းခြင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ကွန်တိန်နာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု, ဆိပ်ကမ်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ရေး
မြို့ပြရထားဖြတ်သန်းထိန်းချုပ်ရေး, မြို့ပြရထားဖြတ်သန်းအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ, မြို့ပြရထား Transit ၏မြို့ပြရထားဖြတ်သန်းယာဉ်, စစ်ဆင်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု
23. Navigation နှင့်ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ
ခါးဗိသုကာနှင့်သမုဒ္ဒရာအင်ဂျင်နီယာ, အဏ္ဏဝါအရင်းအမြစ်များအသုံးချလှုံ့ဆော်မှုများကိုနည်းပညာ, သမုဒ်ဒရာရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်နီယာ, Navigation နည်းပညာ, ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ, ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, သင်္ဘောအီလက်ထရောနစ်နှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာကယ်တင်ဖို့, ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ, သင်္ဘောစစ်ဆေးရေး
ARPA NET နောက်ပိုင်းမှာအာကာသယာဉ်မှူးပညာအင်ဂျင်နီယာ, ပျံသန်းမှုယာဉ်ဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, Aerocraft အင်ဂျင်နီယာထုတ်လုပ်ခြင်း, ပျံသန်းမှုယာဉ် Propulsion အင်ဂျင်နီယာ, လေယာဉ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ဘဝကပံ့ပိုးမှုအင်ဂျင်နီယာ, လေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ, Air ကိုယာဉ်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှု, လေကြောင်းလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ, ပျံသန်းမှုနည်းပညာ, လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, ပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ, အရင်းအမြစ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ, ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာ, ရေအရည်အသွေးသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, အစိမ်းရောင်နည်းပညာများ, စက်မှုဂေဟဗေဒ, ရောင်ခြည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ, ပတ်ဝန်းကျင် Remote Sensing
သမိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦး, အနိမျ့ကာဗွန်အဆောက်အဦး, အင်ဂျင်နီယာကြီးကြပ်ခြင်း, ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ, အင်ဂျင်နီယာကုန်ကျစရိတ်, ဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာ, အပူနှင့်လေဝင်လေထွက်နှင့်အဲယားကွန်းအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ, အဆောက်အဦလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဗိသုကာပညာ, မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်ဒေသစီမံကိန်း, အခင်းအကျင်းဗိသုကာပညာ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအင်ဂျင်နီယာ
မီးအင်ဂျင်နီယာ, ပြည်သူ့အမိန့်ပေး Audio-Visual နည်းပညာ, Network ကိုလုံခြုံရေးနှင့်ဥပဒေစတင်အာဏာတည်ခြင်း, ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဌာနချုပ်နှင့်နည်းပညာ,
Lightning သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, လျှပ်စစ်ပြက်-သက်သေပြချက်နည်းပညာ, အသုံးချမိုးလေဝသနည်းပညာ, လေထု Remote Sensing, လေထုထောက်လှမ်းခြင်း
30. Bioengineering နှင့်ဇီဝဆေးပညာအင်ဂျင်နီယာဌာန
ဇီဝဆေးပညာအင်ဂျင်နီယာ, ဆေးဝါးအင်ဂျင်နီယာ, ဆဲလ်အင်ဂျင်နီယာ, မျိုးဆက်ပွားအင်ဂျင်နီယာ, Bioengineering, ခြေတုလက်တုအရိုးအင်ဂျင်နီယာ, ဇီဝနည်းပညာဆီးကျိတ်ကင်ဆာ
စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာ, စိုက်ပျိုးရေးစက်မှုလယ်ယာနှင့်၎င်း၏ Automation, စိုက်ပျိုးရေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အား, စိုက်ပျိုးရေးရေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စီမံကိန်း, စိုက်ပျိုးရေးအဆောက်အအုံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်စွမ်းအင်အင်ဂျင်နီယာ, စိုက်ပျိုးရေး Remote Sensing
သစ်တောအင်ဂျင်နီယာ, Wood ကသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, သစ်တောထုတ်ကုန်များ၏ဓာတုစက်မှု
စားနပ်ရိက္ခာသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, စားနပ်ရိက္ခာအင်ဂျင်နီယာ, နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ, ဝိုင်အင်ဂျင်နီယာ, သကြားအင်ဂျင်နီယာ, ကစော်ဖောက်ခြင်းနည်းပညာ, စပျစ်သီးနှင့်ဝိုင်အင်ဂျင်နီယာ, စားနပ်ရိက္ခာအရည်အသွေးနှင့်လုံခြုံမှု, စားနပ်ရိက္ခာအာဟာရနှင့်ထောက်လှမ်းခြင်း, ကောက်ပဲသီးနှံနှင့်ရေနံသိုလှောင်မှုနှင့်ထောက်လှမ်းခြင်းနည်းပညာထုတ်လုပ်ခြင်းဖော်ဆောင်ရေး